Article | R Blog..!
Archive for the ‘Article’ Category	About Life is beautiful.ppt virus
Author: Rapster88	Categories: Article, Tips Tricks and Tweaks	Tags: ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘယ်လိုလဲ Vista
Author: Rapster88	Categories: Article	Tags: Windows Vista Pirated Users, Get ready to get another crack!
ဒီတော့ Pirated OS user တွေက ရွေးစရာ တစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်။ SP1 Official release ထွက်ရင် install မလုပ်သေးပဲ crack ထွက်လာတဲ့အထိ စောင့်နေပြီး crack ထွက်လာမှ SP1 ကို install လုပ်ဖို့ပါပဲ။ SP1 မှာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ performance boost such as improving network speed လိုမျိုးတွေပါနေတော့ စမ်းချင်နေတဲ့လူတွေတော့ ခဏ အောင့်ထားပါဦးလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ Author: Rapster88	Categories: Article, News	Tags: RSS feed